Clematis | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny karazany sy ny karazam-piraketan'ny datura ho an'ny fitomboan'ny zaridaina
Datura dia singa tokana sy maharitra. Izy io dia ampiasaina hanamboatra ny fidirana lehibe, ny fandriana, ny fandriana. Misy karazany toy ny ordinatera Datura, Indian, Meteloides, Indian. Samia samy hafa amin'ny haavon'ny loko sy ny loko. Datura dia ampiasaina betsaka amin'ny fitsaboana. Miorina amin'ny tsimok'aretiny ny fanafody psychotropic.
Fambolena, fikarakarana ary famokarana clematis ao amin'ny firenena
Mba hanoroana ny faritra avaratry ny voninkazo tsara tarehy izay misy vanim-potoana lava ary afaka mifamatotra, ny safidy dia mety ho tapaka amin'ny clematis. Ny fomba hampitomboana ny Clematis, dia faritantsika etsy ambany. Ny fisafidianana toerana iray hambolena voninkazo Clematis rehefa mamboly tany malalaka dia mitaky ny safidy tsara indrindra, satria amin'ny tranga iray hafa dia sarotra ho azy ireo ny hahatratra ny voninkazo maitso.
Famerenana ny fomba famokarana clematis
Any Antarctica ihany dia tsy misy clematis avy amin'ny fianakaviana ranunculus. Fa ny fambolena clematis ao amin'ny zaridainako, mba hahatonga ny zavamaniry maniry mamboly sy mahafinaritra maniry avy amin'ny voa, dia tena afaka manomboka ny florist. Ho an'ny fiandohana dia tsy maintsy misafidy ny karazam-bary, ny semi-shrub ary ny karazan-tsakafo klematis, izay ny ankamaroan'izy ireo dia ny voly voaloboka.
Lisitra voninkazo maharitra maniry hatramin'ny fiandohan'ny lohataona ka hatramin'ny fararano amin'ny fararano
Ny voninkazo tsy manam-pahataperana ao amin'ny zaridaina dia manana tombony mazava kokoa raha oharina amin'ny taona isan-taona: tsy mila mamboly isan-taona ianao, manana vokatra avo lenta izy ireo ary farany, misafidy ireo zavamaniry mety, tsy vitan'ny manampahaizan'ny lokony fotsiny ianao, fa koa ny felam-boninkazo foana ao amin'ny zaridinao hatramin'ny fiandohan'ny lohataona tara lava.
Famaritana sy sary avy amin'ny voninkazo maharitra
Ny mpamboly landscape matetika dia mampiasa voninkazo hanamboarana ny zaridaina sy ny tokotany isan-karazany. Manana tarehimarika avo lenta izy ireo ary afaka mamelona sy mamolavola ny faritra eo an-toerana. Fantatrao ve? Ny voaloboka masaka, izay tsy dia mendri-piderana amin'ny fikarakarana azy ireo, dia afaka mamolavola kirarobidin'ny kodiarana eo amin'ny sehatra avo rehetra.
Karazana vary "Fun"
Nitsangana Shinoa: famerenana an-trano. Ahoana raha tsy mahomby ny zavamaniry?
Soso-kevitra amin'ny salady legioma misy laisoa sinoa sy ny sarin'izy ireo
Fanamarihan-tsakafo: rehefa voaloboka ny sodina ary ahoana no fomba itazonana azy io?
Codiaeum kanto (croton) - na mahafinaritra: ny toetra sy ny endriky ny fikarakarana tokantrano
Ahoana no hanomanana, hampiharina ary inona no tena ilaina devyasila
Ny karazam-borona malaza indrindra sy tsara indrindra
Fomba tsotra ahafahana manamboatra seza rocking-it-yourself
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Clematis